Caalamka Online » WAR CUSUB: Al-shabaabka oo Madaafiic ku asqeeyay Saldhig ay ku sugnaayen Saraakiil & Ciidamo ka tirsan M.Puntland Xili Halkaas lagu soo dhawaynayo Maadaxwayne Farmaajo
WAR CUSUB: Al-shabaabka oo Madaafiic ku asqeeyay Saldhig ay ku sugnaayen Saraakiil & Ciidamo ka tirsan M.Puntland Xili Halkaas lagu soo dhawaynayo Maadaxwayne Farmaajo
January 7, 2018 - Written by Maxamad Cabdi - Edited byMaxamad Cabdi
Wararka naga soo gaaraya degaanka Galgala ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in maleeshiyaadka halkaa degan ay Madaafiic ku garaaceen Saldhig ay ku leeyihiin Ciidamada maamulka Puntland.
Maleeshiyaadka ayaa Saldhiga ku garaacay madaafiic gaareysa ilaa Shan oo ku dhacay afaafka hore iyo hareeraha Saldhigga Ciidamada Puntland.
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa sheegay in Madaafiicda qaar ay ku dhaceen gudaha Saldhiga, wallow aysan sheegin khasaaro rasmi ah.
Ciidamada Puntland ayaa dhankooda ku riday tiro Madaafiic ah sida ay sheegen saraakiil ka tirsan Ciidamada Puntland.
Buuraha Galgala ayaa waxaa ka howlgala Maleeshiyaad kala duwan oo isugu jira al-Shabaab iyo Daacish kuwaa oo ku go’doonsan buuraha, waxaana xusid mudan in hareeraha ay ka degan yihiin ciidamada maamulka.
Geesta kale, xaalada deegaanka Galgala ayaa haatan ah mid degan,waxana la soo sheegayaa in ciidamada Puntland ay wadaan howlgallo ay ku baadi goobayaan dadkii ka dambeeyay weerarkaas.